DEG DEG:RW Khayre oo saaka ku wajahan Qardho & Safarkii Garacad oo baaqday kadib markii…. – Puntlandtimes
DEG DEG:RW Khayre oo saaka ku wajahan Qardho & Safarkii Garacad oo baaqday kadib markii….
July 31, 2018 Puntland PL
GAROOWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee Puntlandtimes.com ay haatan ka helayso Qasriga madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in uu baaqday safar Ra’iisal wasaare Xasan Cali Khayre uu maanta ku tagi lahaa degmada Garacad ee gobolka Mudug, waxaana wararku intaasi kusii darayaan in uu ku wajahan yahay saaka magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kar Kaar.
Ujeedka safarka Qardho ee Xasan Cali Khayre ayaa lagu sheegay is xog waraysi iyo kulamo uu la qaadan doono Boqorka Beelaha Daarood Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo sidoo kale waxgaradka gobolkaasi oo uu kala hadli doono arrimo badan.
Deegaanka Garacad ee gobolka Mudug ayaa laga filayey Ra’iisal wasaare Khayre in uu safarka ku gaadho, waxaase baaqday safarkiisii ku wajahnaa deegaankaasi.
Madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa isagu maanta oo Talaado ah safar dhanka cirka ah ku tagi doona degmada Garacad ee gobolka Mudug, waxaana safarkiisa Garacad ku wahelinaya madaxweynaha qaar kamid ah xubnaha gollihiisa wasiirada iyo xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood.
Warar hor dhac ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in degmada Garacad oo haatan ay ku sugan yihiin qaar kamid ah madaxda Puntland iyo wafti hor dhac ah lagu qaban doono munaasibada Kowda August taas oo lagu maasayo maalintii la aas aasay Puntland.
Hadaba isha ku hay safarada Madaxweyne Gaas iyo Ra’iisal Wasaare Khayre oo kala soco Puntlandtimes.com